Madaxwaynaha DDSI Oo Sheegay In Shacabka Deegaanku Ay Sidii Ugu Haboonayd Uga Qayb-qaadanayaan Kaalintooda Muwaadinimo Ee Doorashada 5aad Ee Dalka iyo Deegaankaba. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Sheegay In Shacabka Deegaanku Ay Sidii Ugu Haboonayd Uga Qayb-qaadanayaan Kaalintooda Muwaadinimo Ee Doorashada 5aad Ee Dalka iyo Deegaankaba.
Jigjiga(CN) Sabti.Feb.07.2015, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in ay muwaadiniinta deegaanku ay si balaadhan uga qayb-qaadanayaan kaalintooda muwaadinimo ee doorashada 5aad ee dalka iyo deegaankaba oo ku beegan bisha 9aad ee Ginbood ee tirsiga dalka.
Sida lawada ogsoonyahay waxaa 1 bisha Dir ee tirsiga dalka kabilaabatay diwaan galinta iyo bixinta kaarasaha doorashada ee ay muwaadiniintu qaadanayaan taasoo ay fulinayaan in kabadan 45 xarumood oo doorashooyinka ah guud ahaanba dalka. Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa shqooyinkii doorashooyinka iyo kaarashaba bilaabay in kabadan 3178 xarumood kuwaas oo shacabka u fududaynaya adeegyada kala duwan ee doorashooyinka.
Madaxwaynaha ayaa sheegay in ay dhamaanba shacabka deegaanku ay sidii ugu haboonayd u muujinayaan doorkooda ku aadan ka qayb qaadashada dorashada 2007-da T.I ee dalka iyo deegaankaba. Wuxuuna madaxwaynuhu carabka ku dhuftay in ay doorashadani khibrad iyo waayo aragnimo dheer leedahay taasoo laga bartay 4-tii doorashooyin ee hada kahor soo maray dalka taniyo intii uu xisbiga EPRDF talada qabtay.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan cadaw isku daya in ay fursad kahelaan sidii ay dalka Itoobiya qalalaaso u noqon lahayd balse ay shacabka reer Itoobiya khibrad dheeri ah u leeyihiin feejignaanta iyo ilaalinta xasiloonida iyo horumarka dalkooda.
Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu intaas ku daray in loo baahanyahay in ay shacabku markasta sii xoojiyaan kaalintooda ku aadan sidii ay doorashadani u noqon lahayd mid nabadgaliyo iyo cadaalad ku dhamaata.
Doorashadan 5aad ee dalka iyo deegaanada Itoobiya ayaa kusoo beegantay wakhti uu dalku u gudbayo wareegii labaad ee qorshaha shanta sano ee isbadalka iyo koboca dhaqaalaha, waxaana sanadadii u danbeeyay dalka Itoobiya uu gaadhay horumar balaadhan oo xawli ah kaasoo wadanka wakhti xaadirakan u horseedaya in ay Itobiya kamid noqoto wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.
Isbadalka iyo horumarkan xawliga ah ayaa waxaa sabab u ah qorshyaal iyo istaraatijiyado horumarineed oo dalka si guud iyo deegaanbaka ugu dajisan. Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale wakhtiyadii u danbeeyay waxaa ka hana qaaday horumar balaadhan oo dhinac walba ah iyadoo guulo taariikhi ah lagasoo hoyiyay nabadgaliayada oo hada kahor horey u curyaamisay deegaanka. Waxaana guushaas hantay XDSHSI oo leh aragti shacab taasoo maanta dhaxalsiisay kalsoonida baaxada wayn iyo taageeraha shacabka DDSI ee dalka iyo dibadaba.